Tababare Thomas Tuchel oo ka digay halista ka imaan karta isbar-bardhiga Mbappé iyo halyeeyga reer Brazil ee Pele – Gool FM
Tababare Thomas Tuchel oo ka digay halista ka imaan karta isbar-bardhiga Mbappé iyo halyeeyga reer Brazil ee Pele
(PSG) 03 Apriil 2019. Macalinka kooxda Paris Saint-Germain ee Thomas Tuchel ayaa ka digay isbarbardhiga Kylian Mbappé iyo halyeeyga reer Brazil iyo kubadda cagta aduunka ee Pele.
Mbappé oo da’ayar ah ayaa ku hogaamiyay xulkiisa qaranka France inuu kaga guuleysto koobkii aduunka 2018 ee lagu qabtay dalka Russia dhigooda Croatia, waxayna ahayd markoodii labaad taariikhda ay ku guuleystaan, taasoo keentay in leysla barbardhigo Mbappé iyo halyeeyga reer Brazil ee Pele, oo sidoo kale kula guuleystay Koobka Aduunka xulkiisa Brazil isagoo kaliya ah 18 jir, sanadkii 1958-kii.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu macalinka kooxda Paris Saint-Germain ee Thomas Tuchel kaga hadlay arintan wuxuuna yiri:
“Kylian Mbappé wuxuu sameeyay waxyaabo waaweyn, wuxuu ku jiraa liiska shaqsiyaadka ugu fiican, iyo kuwo sameeyay taariikhda, wuxuu heystaa wax walba ee suuragalinaya in lala barbardhigo iyaga”.
“Waxaa wali u dhiman inuu sameeyo horumar, waa shaqsi aan ka daalin qaab ciyaareedka uu nooga yaabinayo, laakiin waa inaan taxadarnaa”.
“Weli wuxuu heystaa wax badan uu soo bandhigi karo, waa qof aanan joojinin inuu xili kasta naga yaabiyo, balse waa inaan taxadarnaa, wuxuu sameeyey taariikh, waana inaanan deg-degin, sababtoo ah uma baahna in lagu mashquuliyo isbarbardhigyada noocaan oo kale ah”.
HORDHAC : Valencia VS Real Madrid ? xidigaha ka maqan ciyaarta, xaqiiqooyinka kulanka iyo safafka macquulka ah